I-Oukitel WP17: i-smartphone erhabaxa enombono ebusuku | I-Androidsis
Ngaphezulu kweminyaka eli-13, kwi-Androidsis sithethile kwaye yahlalutya inani elikhulu lezixhobo eziphathwayo zazo zonke iintlobo kunye nemisebenzi eyahlukeneyo. Nangona kunjalo, asikaze sithethe ngefowuni ebonelela ngombono ebusuku njengeekhamera zokujonga.
Abafana abavela e-Oukitel basandula ukuhambisa I-Oukitel WP17, I-smartphone erhabaxa emelana nazo zonke iintlobo zamaqhuqhuva kunye nokuwa kwaye idibanisa umbono wasebusuku. Isiphelo esitsha iyafumaneka ngoku kwiwebhu igosa lalo menzi kwaye ukuba siyarhuma, sinokufumana 5 ikhuphoni yesaphulelo se-euro.
1 Yintoni i-Oukitel WP17 enganiki yona
1.1 Ukumelana namanzi nothuli
1.2 Amandla okusindisa
1.3 Ibhetri yeentsuku ezi-2
1.4 I-6,78-intshi ye-HD epheleleyo + isikrini
1.5 Umboniso we-90 Hz
1.6 Ikhamera ye-64 MP
1.7 Infrared umbono ebusuku camera
1.9 Iyahambelana neenethiwekhi ze4G
Yintoni i-Oukitel WP17 enganiki yona
I-Oukitel yeyona smartphone yokuqala ukubetha emarikeni ebandakanya umbono wasebusuku kwikhamera yayo, i-smartphone ivumela ukurekhoda nokuthatha imifanekiso ngaphandle kohlobo lokukhanyisa, njengeekhamera zokujonga.
Ukongeza, isinika i uyilo oluhle ngokugqitywa komgangatho ophezulu esivumela ukuba siyisebenzise yonke imihla emsebenzini okanye ukuya kwimisitho ebalulekileyo. Kodwa ikwayilelwe nokuba iqhutywe kukhenketho lwethu lwangaphandle, enkosi kukuchasana nokunikezela ukuwa, iimpembelelo ...
I-Oukitel WP17 isinika isatifikethi IP68, IP69K kunye neMIL-STD-G810, isatifikethi somkhosi esifumaneka kwiifowuni ezimbalwa kakhulu.
Enkosi kwezi ziqinisekiso, sinokufaka i-Oukitel WP17 ngaphandle kwengxaki. ukuya kuthi ga kwi-1,5 yeemitha ubunzulu ukuya kuthi ga kwimizuzu engama-30, kwaye enkosi kwiikhamera zayo sinokurekhoda iividiyo kumgangatho we-4K phantsi kwamanzi.
Ngokuchasene nokuwa, i-Oukitel WP17 kunjalo ukumelana amathontsi ukuya kwiimitha 1,5 ngaphandle kokufumana monakalo omnye, ngaphandle kokubonisa naluphi na uhlobo lophawu ngaphandle.
Ngaphakathi kwe-Oukitel WP17, sifumana iprosesa Helio G95 yiMediaTek, yenye yeeprosesa ezinamandla zale chip yaseAsia isinika unxibelelwano lwe4G.
Inkqubo yeHelio G95 yenziwe I-8 cores kwi-2.0 GHz kwaye ihamba ne-8 GB ye-RAM kunye ne-128 GB yokugcina (isithuba esinokwandisa ukuya kuthi ga kwi-256 GB kunye nekhadi le-SD), ukuze sikwazi ukurekhoda inani elikhulu leevidiyo kumgangatho we-4K, sithathe amawaka efoto kwaye sifake imidlalo nokuba ingakanani indawo abahlala kuyo ngaphandle kokufumana indawo yokugcina.
Ibhetri ikhona kwaye iya kuhlala Enye yeengxaki eziphambili zee-smartphones. I-smartphone ibe sisixhobo esisisebenzisayo sonke ukunxibelelana, sizazise kwaye sisebenze ngokuthumela ii-imeyile, ukuskena amaxwebhu, ukuthatha iifoto, ukurekhoda iividiyo ngaphandle kokulibala usetyenziso lwemiyalezo kunye nenethiwekhi yoluntu.
Ukuba ungumsebenzisi we-smartphone onomdla, uya kuthanda ukwazi ukuba I-Oukitel WP17 ibandakanya ibhetri ene-8.300 mAh, Ibhetri enokusebenzisa kakhulu isixhobo, inokuhlala ngaphezulu kweentsuku ezi-2 ngaphandle kokuya kwitshaja.
Ukuba singxamele ukuyilayisha, akukho ngxaki, kuba enkosi Inkxaso yokutshaja ngokukhawuleza ukuya kuthi ga kwi-18W, sinokutshaja ibhetri enkulu ngeeyure nje ezi-4.
Ukuba siyaphuma endlwini ngaphandle kokutshaja ii-headphone zethu ezingenazingcingo, akukho ngxaki, kuba siya kuba nakho ukubabiza ngasemva ngesixhobo se-Oukitel WP17, ngokunikezela umva inkqubo yokutshaja.
I-6,78-intshi ye-HD epheleleyo + isikrini
Isikrini, kunye nebhetri, zizinto ezimbini ezibaluleke kakhulu kubasebenzisi abaninzi. Ayisiyo kuphela umgangatho wesikrini, kodwa isisombululo kunye nobungakanani. I-Oukitel WP17, idibanisa ifayile ye- Isikrini se-6,78-intshi esine-HD epheleleyo + isisombululo (2.400 × 1080) enomlinganiso we-20,5: 9.
Oku kusivumela ukuba sonwabele imidlalo yethu esiyithandayo kwenye isikrini esikhulu kunye nesisombululo esona sinokwenzeka, ngaphandle kokucinezela amehlo akho nangaliphi na ixesha.
Elinye inqaku ekufuneka lithathele ingqalelo i-Oukitel WP17 linqanaba lokuhlaziya, inani lemifanekiso eboniswe ngomzuzwana. Kwimeko yesiphelo, kunjalo 90 Hz (90 fps) esivumela thina Yonwabela ukuthamba okukhulu Zombini zisebenzisa usetyenziso kunye nemidlalo.
Phakathi kuluhlu lwee-smartphones ezirhabaxa, i-Oukitel WP17 yiyo Ifowuni yokuqala yohlobo lwayo ebonelela ngezinga eliphezulu lokuhlaziya, kuba zonke zibethelelwe kwi-60Hz (60 fps).
Ikhamera ye-64 MP
Nge-Oukitel WP17 awuyi kuba nangxaki xa ufaka imifanekiso kwaye uyandisa njengoko ufuna ukubulela Inzwa ephambili ye-MP eyi-64, Isivamvo esivumela ukurekhoda iividiyo kumgangatho we4K kuyo nayiphi na imeko.
Kwakhona iquka i-2 MP macro sensor ukwazi ukuthatha iifoto ezisondeleyo zezilwanyana, izityalo, izinto kunye nokubona iinkcukacha ezisinda kwiliso lomntu ngaphambili.
Ngaphambili, sifumana Ikhamera ephambili ye-16 MP, esinokuthi ngayo senze iiselfie kunye neefowuni zevidiyo ezikumgangatho ophezulu.
Infrared umbono ebusuku camera
Njengoko bendiphawulile apha ngasentla, enye yezona zinto zinomdla kule Smartphones yikhamera ye-infrared night camera, enkosi kwi-20 MP sensor ukuba le terminal ifaka kunye ne-4 IR emitters ebandakanya ukuba ikuvumela ukuba uhlengahlengise uluhlu lombono 1 ukuya kwi-20 yeemitha.
Ndiyabulela kule khamera, asinakuthatha imifanekiso kunye neevidiyo kubumnyama bodwa, kodwa sikwasivumele bona okusingqongileyo ngokucacileyo ngokupheleleyo kwiscreen, ngokungathi sisebenzisa isibane.
Kunye neHelio G65, ngaphakathi kwe-Oukitel WP17 esiyifumanayo Android 11, Ngawo onke amanqaku amatsha athe le nguqulo ye-Android yazisa kwaye akukho naziphi na izinto eziphazamisa ukusetyenziswa kwesixhobo.
Ibandakanya i-chip ye-NFC esivumela ukuba sisebenzise i-Oukitel WP17 ngeGoogle Pay kwaye ke sikwazi ukubhatalela ukuthenga ngefowuni yethu.
Iyahambelana neenethiwekhi ze4G
Masinyaniseke. Iinethiwekhi ze5G zilungile kakhulu, zisinika uqhagamshelo ngesantya esiphezulu kakhulu, nangona kunjalo, isekhona iminyaka embalwa eyadlulayo obu bugcisa bufumaneka kwihlabathi liphela, ukuze namhlanje, akuyomfuneko ukuthenga i-terminal enikezela ngayo.
I-Oukitel WP17 yiyo iyahambelana neenethiwekhi ze4G kwihlabathi liphela. Ukongeza, yi-Dual-SIM ukuze sisebenzise imigca emibini ngokudibeneyo ukwahlulahlula umsebenzi wasimahla kwaye ngenxa yoko sikwazi ukusebenzisa i-terminal enye kuphela imihla ngemihla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » I-Oukitel WP17: i-smartphone erhabaxa enombono ebusuku
Iimidlalo ezi-5 eziphambili zekati ze-Android
Ngaba ukusebenza kwesinyithi kuyasebenza? Ezi zezona zilungileyo zi-5 kwi-Android